နှင်းခူကိုသက်သာစေတဲ့နည်းလမ်းကောင်း – Trend.com.mm
Posted on May 12, 2019 May 31, 2019 by Shun Lei Phyo
ယားနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နှင်းခူရောဂါဟာ ယားတွေထဲက နာမည်ကြီးရောဂါတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ နှင်းခူမှာ နှင်းခူစိုနဲ့နှင်းခူခြောက်
ဆိုပြီးနှစ်မျိုး ရှိပြီး ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ယားတာ က တော့ယားတာပါပဲ။ အသားပေါ်မှာ ပြဲပြဲ ကြီးပေါက်တတ်ပြီး အနီလိုလို အညိုလိုလိုသမ်း
နှင်းခူရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်လုံးဝကိုသိထားသင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်က လက်သည်းနဲ့တစ်ဗျင်းဗျင်းမကုတ်မိစေဖို့ပါပဲ။ ကုတ်လေ
ပွားလေဆိုတဲ့ ထဲမှာ နှင်းခူရောဂါလည်းပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ယားယားမကုတ်မိပါစေနဲ့။ ကုတ်မဲ့အစားအယားပြေအောင် တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာ
နှင်းခူဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကုသနိုင်သလဲ? နှင်းခူရောဂါပျောက်ကင်းစေတဲ့ လိမ်းဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိသလို
သဘာဝနည်းလမ်းလေးတစ်ချို့လည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေလည်းဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
ကြက်သွန်ဖြူကစားရင်ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သလိုပဲ အခုတစ်ခါမှာလည်း ကြက်သွန်ဖြူကိုပါးပါးလေးတွေလှီးပြီး
နှင်းခူရှိတဲ့နေရာကို ကြက်သွန်ဖြူအရည်တွေထွက်တဲ့အထိပွက်တိုက်ပေးပါ။ နှင်းခူနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့တွေ့ရင်အနာနည်းနည်းစပ်နိုင်
ပင်မဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ပေးပါက ရက်အနည်းငယ်တွင်းသက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ပျားရည်ဟာ ယားနာတွေအတွက်ဆေးစွမ်ကောင်းတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နှင်းခူပေါ်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီးခြောက်အောင်သုတ်ကာ
ငါးခူ (catfish) ငါးကိုဦးခေါင်းဖြတ်အတွင်းပသီများကိုဖယ်ရှားပြီးနေခြောက်လှမ်း၍မီးဖြင့်အပူပေးပြီးပြာချပါရရှိလာသောငါးခူပြာအမှုန့်ကိုအုန်းဆီ(သို့)ရေနံဆီဖြင့်ပျစ်ပျစ်ဖျော်စပ်ပြီးနှင်းခူထဲသို့စိမ့်ဝင်အောင်ပွတ်ပေး၍အဝတ်အစ
ပါးပါးဖြင့်စည်းထားပေးလိုက်ပါက တစ်ပါတ်အတွင်းမှာသိသိသာသာနည်းပါးလာပြီး ပျောက်ကင်းသွှားပါလိမ့်မယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ရဲ့အနှစ်ကို ထုတ်ပြီး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အနာရှိရာပေါ်ကို စိမ့်ဝင်နေအောင်လိမ်းပေးပါ။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သူ့ချည်းပဲမလိမ်းပဲ အရင်ဆုံးအနာကိုဆားနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပွက်ပေးပြီး
စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်လာမှ ရှားစောင်းလက်ပတ်လေးသုတ်လိမ်းပေးရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အပင်ကရတဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်စစ်စစ်ပါနော်…ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါဝင်တဲ့ Cosmetic တွေကိုသုံးရင်တော့သိပ်ထိထိရောက်ရောက်
ယားနာရောဂါတဈခုဖွဈတဲ့ နှငျးခူရောဂါဟာ ယားတှထေဲက နာမညျကွီးရောဂါတဈခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ နှငျးခူမှာ နှငျးခူစိုနဲ့နှငျးခူခွောကျဆိုပွီးနှဈမြိုး ရှိပွီး ဘယျဟာပဲဖွဈဖွဈ ယားတာ က တော့ယားတာပါပဲ။ အသားပျေါမှာ ပွဲပွဲ ကွီးပေါကျတတျပွီး အနီလိုလို အညိုလိုလိုသမျးတဲ့ အရောငျမြိုးပါ။ နှငျးခူရောဂါခံစားနရေတဲ့သူတဈယောကျလုံးဝကိုသိထားသငျ့တဲ့အခကျြတဈခကျြက လကျသညျးနဲ့တဈဗငျြးဗငျြးမကုတျမိစဖေို့ပါပဲ။ ကုတျလပှေားလဆေိုတဲ့ ထဲမှာ နှငျးခူရောဂါလညျးပါပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျလောကျယားယားမကုတျမိပါစနေဲ့။ ကုတျမဲ့အစားအယားပွအေောငျ တဈခကျြနှဈခကျြရိုကျလိုကျတာကမှပိုအဆငျပွနေိုငျပါသေးတယျ။နှငျးခူဖွဈလာပွီဆိုရငျ ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ကုသနိုငျသလဲ? နှငျးခူရောဂါပြောကျကငျးစတေဲ့ လိမျးဆေးတှလေညျးအမြားကွီးရှိသလိုသဘာဝနညျးလမျးလေးတဈခြို့လညျးရှိပါတယျ။ ဘယျလိုနညျးလမျးလေးတှလေညျးဆိုတာ တဈခကျြကွညျ့လိုကျရအောငျ…(၁) ကွကျသှနျဖွူကွကျသှနျဖွူကစားရငျကငျဆာရောဂါကို ကာကှယျနိုငျသလိုပဲ အခုတဈခါမှာလညျး ကွကျသှနျဖွူကိုပါးပါးလေးတှလှေီးပွီးနှငျးခူရှိတဲ့နရောကို ကွကျသှနျဖွူအရညျတှထှေကျတဲ့အထိပှကျတိုကျပေးပါ။ နှငျးခူနဲ့ကွကျသှနျဖွူနဲ့တှရေ့ငျအနာနညျးနညျးစပျနိုငျပငျမဲ့ နစေ့ဉျလုပျပေးပါက ရကျအနညျးငယျတှငျးသကျသာသှားစနေိုငျပါတယျ။(၂) ပြားရညျ ပြားရညျဟာ ယားနာတှအေတှကျဆေးစှမျကောငျးတဈခုဆိုလညျးမမှားပါဘူး။ နှငျးခူပျေါကို ရစေငျအောငျဆေးပွီးခွောကျအောငျသုတျကာပြားရညျကိုခပျပါးပါးလေးသုတျလိမျးပေးပါ။ (၃) ငါးခူငါးခူ (catfish) ငါးကိုဦးခေါငျးဖွတျအတှငျးပသီမြားကိုဖယျရှားပွီးနခွေောကျလှမျး၍မီးဖွငျ့အပူပေးပွီးပွာခပြါရရှိလာသောငါးခူပွာအမှုနျ့ကိုအုနျးဆီ(သို့)ရနေံဆီဖွငျ့ပဈြပဈြဖြျောစပျပွီးနှငျးခူထဲသို့စိမျ့ဝငျအောငျပှတျပေး၍အဝတျအစပါးပါးဖွငျ့စညျးထားပေးလိုကျပါက တဈပါတျအတှငျးမှာသိသိသာသာနညျးပါးလာပွီး ပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မယျ။(၄) ရှားစောငျးလကျပတျရှားစောငျးလကျပတျရဲ့အနှဈကို ထုတျပွီး ခွောကျသှနေ့တေဲ့ အနာရှိရာပျေါကို စိမျ့ဝငျနအေောငျလိမျးပေးပါ။ အဆငျပွမေယျဆိုရငျသူ့ခညျြးပဲမလိမျးပဲ အရငျဆုံးအနာကိုဆားနဲ့ဖွညျးဖွညျးလေးပှကျပေးပွီးစပျဖငျြးဖငျြးဖွဈလာမှ ရှားစောငျးလကျပတျလေးသုတျလိမျးပေးရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ အပငျကရတဲ့ရှားစောငျးလကျပတျစဈစဈပါနျော…ရှားစောငျးလကျပတျပါဝငျတဲ့ Cosmetic တှကေိုသုံးရငျတော့သိပျထိထိရောကျရောကျမရှိနိုငျပါဘူး…
ထမင်းစားတိုင်းဇွန်းမသုံးပဲ လက်နဲ့စားတတ်တဲ့အကျင့်က မှန်ရဲ့လား?…